शङ्का | samakalinsahitya.com
- गङ्गा कर्माचार्य पौडेल
नेपाल सरकारले विश्वभरी फैलिरहेको कोरोना भाइरसबाट बच्न देशभर एकसाथ लकडाउनको घोषण ग¥यो । लकडाउनका बेलामा कोही नागरिक भोकै नपरुन् भनि स्थानिय निकाय अन्तरगत ओडा कार्यलयलाई राहत वितरणको जिम्मा दिइयो । कर्मचारीले राहत आवश्यक परेका वडाबासीलाई नाम दर्ता गराउन आह्वान गरे ।
दैनिक ज्याला मजदुरीबाट परिवारको भरण पोषण गर्ने निम्न वर्गका नागरिकहरूले कर्मचारी समक्ष आआफ्ने विवरण टिपाए । त्यही हुलमा आएर चतुरीले पनि नाम टिपाई । उसलाई त्यहाँ देखेर केही मान्छेहरूले घुरेर हेरे र मनमनै भने“छ्या त्यो चतुरी कस्तो लोभी रहिछ । लोग्ने सरकारी जागिरे छ । आफु तरकारी पसलबाट मनग्गे आम्दानी गर्छे । गलामा त्यती मोटो सुनको सिक््रmी । हातका औलामा असर्र्फि लाएर पनि केहि नभाको स्वाङ् पार्छे लाज नभाकि”।
चतुरीलाई भने अरुले त्यसरि घुरेर हेरेको पटक्कै मन परेन । उसले तिनीहरूलाई कर्के आँखाले हेरेर नसुन्ने गरि भनि“मैले तिमीहरूसँग मागेकी छु र ? आ...सरकारको त हो नि लिन्छु । पाए सम्म लिन्छु”।
दिउँसो वडाका कर्मचारीले विहान नाम लेखाएजतिलाई लामबद्य गराई कार्यालय कक्षबाटै प्रतिब्यक्ति( ५ किलोचामल,१किलो दाल, एक पाकेट नुन,आधा लिटर खाने तेल,एक धार्नी आलु आधाकिलो प्याज)राखिएको झोला सहितको राहत वितरण गरे । चतुरीले पनि राहत थापेर बाहिर निस्की । उसले आफनो भन्दा अरूको झोला ठूलो देखी । त्यसपछि ए ! बैनी खै खै तिम्रो झोलामा केके रैछ ? भनेर एउटी महिलाको झोला खोतल्न थालि । अरूपनि दुइचारजना झुरुप्पा जम्मा भए । उसलाई घुरेर हेर्नेहरू पनि त्यहींं आए । चतुरीले आफ्नो र त्यो झोलामा भएको सामान उस्तै देखेर ओठ लेप्राई अनि टिमटिम पर्दै बाटो लागि ।
साँझ चतुरीले राहतमा पाएको सामान बाटै भोजन तयार पारी अनि श्रीमान र बच्चा सँगै बसेर खाना खाँदै गर्दा ट्वाक्क जिब्रो पड्काएर भनि “सामान त गतिलै दिएका रहेछन्”। श्रीमानले पनि श्रीमतीको कुरामा सहमती जनाउँदै टाउको हल्लायो ।
खाइपिइ धन्दा सकेर चतुरी ओछ्यामा जानेबेला लुगा फेर्दा गलामा लाको सुनको सिक््रmी नदेखेर खङ्ग्रङ्गै भई । त्यसपछि ए ! कुमारका बा लौन मेरो तीन तोलाको सिक्m्री हरायो । सिक््रmी चोर पक्रनु प¥यो भन्दै चिच्च्याएर रुन,कराउन,थाली ।
“राहत थाप्न गहना लाएर जाने हो त ? अब कस्लाई पक््रmीनु जानु ? भनेर उल्टै हकारे श्रीमानले ।
दुईजना मान्छे माथि शंका लागेको छ । विहान देखि उनिहरुले मलाई घुरेर हेरिरहेका थिए । मेरो तीन तोलाको सिक््रmी....हरायो भन्दै डाको छाडेर ह्वाँ... ह्वाँ...रोइरही चतुरी
प्रकाशित मिति : प्रकाशन मिति : मगलबार, 27 आश्वीन, 2077